संरचनामा दीगोपन कायम गर
सन्दकपुर दैनिक निर्माण विकासको आधार हो । विकासलाई देशवासीले हल्का अर्थमा लिने गरेका छन् । बाटो, पुल आदि निर्माण गर्न सकेमा विकासको द्वार खुल्ला हुन्छ । यी संरचा तयार गर्न करोडौं रुपैया“ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता खर्चिला संरचना दर्ीघकालिन टिकाउको लक्ष्य राखेर निर्माण गर्नु पर्नेमा किन हो हाम्रो मुलुकमा धेरै जसो स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका संरचनाहरू अल्पावधीमै निकम्मा हुने गरेको
सम्मानित भए शास्त्रीय छन्दवादी कविहरु
मानिसको पर्ूवज बाँदर भन्नेमा धेरैको विश्वास छ । राम्रेा बाँदर र नराम्रो मान्छेको फरक जोकोहीले छुट्याउन सक्छ । आकृतिगत शारीरिक बनोटमा हरेक जीवमा अन्तर पाइन्छ । जुम्ल्याहा प्राणीहरुको समेत अनुहारमा फरक पन रहेको हुन्छ । जिवित प्राणीहरुको शरीरको आकृति निर्माण गर्ने कोषिकाहरुको बनोट एकै प्रकारको रहेको कुरा बैज्ञानिकहरले प्रमाणित गरेका छन् । एक प्रजातीका जानवरहरुका अङ्गगत बनोट एकै प्रकारका छन्
र्सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर बुद्धि गर
नेपालमा शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने पहिलो प्रयाश २०२८ सालमा राटि्रय पद्धतिको शिक्षा योजना लागू गरेर थालिएको मानिन्छ । ३२ साल सम्म ४ चरण गरेर देशभर लागु गरिएको यस योजनाले ब्यवसायिक सोच पनि राखेको थियो । बिद्यालय स्तरको शिक्षा देखिनै पर्ूव ब्यवसायिक र ब्यवसायिक बिषयहरुको पठनपाठन सुरु गरिएको थियो । साधारण र ब्यवसायिक गरेर माध्यमिक विद्यालयहरुलाई २ वर्गमा बिभाजन गरिएको थियो भने
नामलाई कामले र्सार्थक पार
सृष्टिका हरेक जीव शान्तिपर्ूवक जीवनयापन गर्ने चाहना राख्छन् । यो अभिलाषा पूरा गर्न जीव आफैं तत्पर रहनु पर्छ । जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताहरू खान्की, बास र लाउने कपडाको बन्दोबस्त बारेमा सोचेर कालान्तरसम्म दीगो पेशा ब्यवसायमा लाग्ने प्राणी मानिस मात्रै हो । अन्य जीवहरू अझैसम्म प्राकृतिक स्थानहरूलाई बसोबासको थलो बनाउ“छन् र प्राकृतिक खाद्य बस्तुहरूको खोजीमा दैनिक कृयाशील रहन्छन् । यसबाहेक मोटामोटी मानिस
सेवा दिएर कर फिर्ता गर
राज्यको मुख्य तत्वहरूमा भूमि र जनता पर्दछन् । राज्यको र्सार्वभौमिक घेरा भित्र रहेका जमिन, ज·ल, खानी, पानी लगायतका बस्तुहरूको उपभोग गरेर जीवनयापन गर्ने अधिकार जनतामा रहेको हुन्छ । सबै पशुहरू र त्यसमा पनि मानिसमा आफु मात्र राम्रोमिठो खाउ“खाउ“ भन्ने भावना लुकेर रहेको हुन्छ । यसको लागि जीवहरू आफ्ना शक्ति प्रयोग गर्छन् । शक्ति सम्पन्नले दर्ूबललाई थिचोमिचो गर्छन् । यसलाई हामी
निष्पक्ष प्रशासन विकासको आधार
देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने पर्यटन विकासलाई चाहिने पूर्वाधार खडा गर्न हरेक बर्ष नीतिगत ब्यवस्था हुने गर्छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको तर्जुमा पनि हुने गरेको छ । तर अपेक्षा अनुरुपको उपलब्धी पाइराखिएको छैन । यसको प्रमुख कारणमा देशको राजनैतिक सङ्क्रमणलाई औंल्याउने गरिन्छ । प्रत्यक्षत राजनीति र विकास निर्माणलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन । देशको शासन सत्ताको बागडोर कसै न कसैको
इण्टरनेट र प्रयोगको अवस्था
(सम्पादकीय) ... पुराणहरुमा देवताहरु र ऋषिमुनीहरु बीचमा आकाशबाँणीबाट कुराकानी हुने गरेको कथाहरु पढ्न पाइन्छ । अठारौं शताब्दीको सुरु देखि भएको तिब्र बैज्ञानिक खोजी अनुसन्धानले यातायात, सञ्चारआदि क्षेत्रमा आश्चर्य लाग्दो प्रगति गर्यो । यूरोपेली मुलुकमा बैज्ञानिक उपलब्धीलाई सहज रुपमा लिइन्छ । मानिस जन्मदै देखि बैज्ञानिक उपकरणको प्रयोग गर्छंन् । बिद्युतीय उपलब्धीले सारा बैज्ञानिक जगतलाई मद्दत पुर्याएको छ । दाउरा, कोइला हुँदै
सम्पादकीय/मान सम्मान सिफारिस आयोग
२०७२ साल भदौ महिनामा मात्र ५ वटा दिवस र ८ वटा धार्मिक उत्सवहरु परेका छन् । हरेक वर्ष नाग पञ्चमीबाट हिन्दू परम्परा अनुसारका चाडहरु सुरु हुन्छन् । भदौमा नागपञ्मी, गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, ऋषितर्पणी (जनै पूर्णिमा), गाईजात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, अनन्त चतुर्दशी, कुशे औंसी र हरितालिका तीज छन् । त्यसै गरी दिवसहरुमा शिक्षा, निजामति सेवा, प्रथामिक उपचार, बाल र धर्म सभा दिवसहरु
सम्पादकीय/नेताहरु एकजुट हुने बेला
राजनैतिक दवाव दिन विभिन्न दल र राजनैतिक समूहहरुले बन्द र हडताल गर्नु गराउनु एउटा नेपाली संस्कृति बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा जनताले आफुलाई लागेका कुरा ब्यक्त गर्न पाउनु पर्छ, प्रदर्शन गर्न सभा समारोह गरेर विरोध वा समर्थन गर्न पाइन्छ । यो अधिकार दल र समूहमा मात्र सिमित नभएर हरेक ब्यक्तिले यसको उपभोग गर्न पाउछन् तर एक पक्षले गरेको कृयाकलापले अर्काको
सम्पादकीय / वास्तविकताको खोजी गरौं
इलामका विभिन्न बजारहरुबाट २०७२ सालको रोपाईँजात्रा सम्पन्न भएका समाचारहरु प्राप्त भएका छन् । गाईजात्रा, लाखेनाच जस्ता संस्कृतिका स्वरुपहरुलाई नेवारी संस्कृति अनुसार प्रचलनमा आएका मानिने गरेका छन् । यसैमा जोडेर मौसम अनुसारको रोपाईँ जात्राले इलामका बजारहरुमा ठूलो महत्व राख्न थालेको छ । गाउँमा किन यसको आयोजना हुदैन ? यो संस्कृतिको एउटा अङ्ग हो भने यसलाई आलोपालो गर्दै गाउँ सम्म पुर्याउने चेष्टा
सच्चा नेपालीले बुझौं
(सम्पादकीय) नेपालमा नयाँ गणतन्त्रात्मक संघीय संविधान बनाएर घोषणा गर्न र नयाँ संविधानको दायरामा रहेर नागरिक उपलब्धी हासिल गर्न आश गरेर बसेका सरकार, सांसद र जनताको आशा माथिको आकाशमा कालो बादल मढारिएको छ । सैद्धान्तिक गफ, निर्णय, माग र बिरोधका ढिङ्गुर लागेका छन् तर बिधान निर्माणको अन्तिम टुङ्गो लाग्न
समाचार पढ्न पाइयोस्
(सम्पादकीय) नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र तथा राजनैतिक क्षेत्रमा ब्यापक भ«ष्टाचार तथा अनियमितता भएका गुनासाहरु सर्वदा सुन्नमा आउने गरेका छन् । सरकारी दायित्वमा भएका बिकास निर्माण लगायत स्कुलहरुमा समेत पर्याप्त भ«ष्टाचार भएका समाचारहरु आउने गरेका छन् । जनताका नाममा सरकारले बिनियोजन गरिएका रकमहरुमा ब्यापक भ«ष्टाचार भएका गुनासाहरुलाई काट्न सार्व जनिक सुनवाइ गर्ने एउटा अनौठो प्रचलन सुरु भएको छ । सार्वजनिक लेखा
निष्पक्ष, सत्य र सकारात्मक चरित्र
सुसम्पन्नतामा दीर्घकालसम्म रहेर प्रतिष्ठा कायम गर्ने चाहना प्रत्येक मानिसभित्र रहेको हुन्छ । यी मानवीय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने थलो समाज हो । समाजले असल कार्यहरुको प्रशंसा गर्छ । यसको लागि समाजमा रहेका हरेक सदस्यलाई आनन्दित बनाउने कृयाकलाप हुन जरुरी छ । एक्लो मानिसले समाजमा केही गर्न सक्दैन र जति नै असल काम गरेपनि समाजले अनुभूत नगरेसम्म कामको मर्यादा कायम हुन पनि
बि.सं. अनुसार २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा भएको नेपालको राजनैतिक आन्दोलनले नागरिक हक र अधिकारलाई प्रथम पटक उजागर गरेको नेपालको आधुनिक इतिहासको अमिट सत्य हो । मानवले मानवको हैसियतले बाँच्न पाउनु पर्छ । संसारभरका मानिसहरु चाहे नागरिकता जहाँको होस् समान सुविधाका साथ जीवन यापन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धारणाले विश्व मानवाधिकार मञ्च खडा भएको छ । सम्पूर्ण विश्व सबै मानवको घर
गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान पुगोस्
सडक यातायात हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको लागि आर्थिक बिकासको मेरुदण्ड हो । हिमाली र पहाडी भूभाग बढी मात्रामा भएकोले सडक सञ्जालले देशका सबै भागलाई जोड्न नेपालको लागि एउटा चुनौति हो । गुणस्तरीय सडक निर्माण कार्य निक्कै खर्चिलो हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो देशमा हाल सञ्चालनमा आइरहेका मुख्य सडकहरु विभिन्न समयमा छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन र दातृ राष्ट्रहरु जापान, रुस, बेलायत
बजारीकरणमा ध्यान देउ
अनादि कालदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुकको रुपमा मानिएको छ । विज्ञान र प्रविधीको रफ्तारले आजको विश्वलाई भोलिपल्टै कहाँकहाँ प¥याउँछ । तर नेपालीहरु जहिंको त्यहँीं रहेका छौं । कृषिप्रधान मुलुक भएर भारत, थाइल्याण्ड र भियतनाम जस्ता मुलुकहरुबाट नेपालले करोडौंको चामल आयात गर्नुपर्छ । हालसालै संविधान निर्माणको क्रममा संसदमा पेस हुने मस्यौदामा प्रदेश बिभाजनमा चित्त नबुभाmएका मधेसवादी दलहरुको आव्हानमा भएको तराइ बन्दले राजधानी
विधी निर्माण र प्रयोगमा सकारात्मक बनौं
कुनै पनि देशको शासन गर्ने कुनै ब्यक्ति हु“दैन जो उसको मनमा आएका भावना र आवश्यकता अनुसार चलोस् । हाम्रो मात्र होइन, संसारका प्राय सबै मुलुकहरुमा प्रागऐतिहासिक र ऐतिहासिक कालमा राजतन्त्र थियो । राजा भनेको एउटा मानव र ब्यक्ति हो । अधिकांश मुलुकहरुबाट राजतन्त्रले विदा लिएको छ । यसको कारण होः राजाले मानवीय ब्यक्तिगत हितलाई प्रथमिकता दिएर देशलाई आझेलमा राखे । हाम्रा
अलैंची विकासमा सरकारी चासो कम भयो
अलैंची पूर्वी नेपालको नगदेबालीहरु मध्ये सबैभन्दा दामी हो । सर्वप्रथम यो खेती रहरको लागि सिक्किमबाट भारतीय सिमाना जोडिएका नेपाली बस्तीहरुमा ल्याइएको अनुमान गरिएको छ । नेपालीहरुको अत्याधिक बसोबास भएको सिक्किममा एक आपसमा वैवाहिक सम्बन्ध अनादिकाल देखि सहिआएको छ । आज भन्दा करिब १ सय २० वर्ष अगाडि भेटघाटको क्रममा सिक्किम जाने नेपालीले अलैंचीको बास्ना मनपरेर आफ्नो करेसा सजाउन बिरुवा ल्याएर
निष्पक्ष अनुगमनमा जोड
मासु खान चाहने तर किन्न कुनै उपाय नभएका मानिसलाई माछा पाल्ने सीप सिकाउनु तर माछा किनेर नदिनु वा माछा किन्न पैसा नदिनु भन्ने उखान छ । यो कहावत चीन तिरबाट आएको हो । गरिब मुलुकले नागरिकहरुको आर्थिक उन्नति गराउन अनेक प्रयास गर्छन । सोझै खाने लाउने सामाग्री दिएर, घर बनाइदिएर साध्य हुन्न । आखिर आर्थिक विपन्नताको प्रमुख कारण उचित परिश्रमको